China PLC voafehy milina fitaratra sandblasting milina mora miasa orinasa sy mpanamboatra | Zhengxing mekanika
PLC voafehy vera sandblasting milina fandidiana mora
Ny masinina dia fehezin'ny PLC, mety amin'ny fanodinana 5-30mm hatevin'ny vera fisaka sy lamina sterika. Ny fehikibo dia mampita ny fehikibo, rehefa tonga eo amin'ilay toerana hahazoana fasika ny vera, ny basy izay entin'ny fehikibo dia hihetsika ambony sy ambany ary hipoaka fasika. Ny haavony sy ny sakan'ny sandblasting dia azo ahitsy arakaraka ny fepetra takiana. Ny tombony azo avy amin'ny fehikibo dia ny fifindrana maharitra, ny fahombiazany ary ny fikojakojana mora foana. Ny firafitry ny basy sandblasting dia ivelan'ny masinina izay ahazoana tombony amin'ny asa maharitra sy ny fikojakojana isan'andro. Ny masinina dia mandray ny PLC amin'ny fifehezana, izay mitondra fandidiana mora sy fikarohana ny toeran'ny fitaratra avy hatrany rehefa maharitra sandblasting.
Easy interface interface
basy manapoaka basy
Ny masinina dia fehezin'ny PLC, mety amin'ny fanodinana 5-30mm hatevin'ny vera fisaka sy lamina sterika. Ny fehikibo dia mampita ny fehikibo, rehefa tonga eo amin'ilay toerana hahazoana fasika ny vera, ny basy izay entin'ny fehikibo dia hihetsika ambony sy ambany ary hipoaka fasika. Ny haavony sy ny sakan'ny sandblasting dia azo ahitsy arakaraka ny fepetra takiana.
Ny tombony azo avy amin'ny fehikibo dia ny fifindrana maharitra, ny fahombiazany ary ny fikojakojana mora foana. Ny firafitry ny basy sandblasting dia ivelan'ny masinina izay ahazoana tombony amin'ny asa maharitra sy ny fikojakojana isan'andro. Ny masinina dia mandray ny PLC amin'ny fifehezana, izay mitondra fandidiana mora sy fikarohana ny toeran'ny fitaratra avy hatrany rehefa maharitra sandblasting.
1600 mm haavony (ZXSD16)
Haavo 2000 mm (ZXSD20)
2500 mm haavony (ZXSD25)
Haavon'ny vera fanodinana
12-15m² / h (rehefa mampiasa Green carborundum)
0.6 ~ 0.8Mpa (5m³ / min)
Previous: Motera 6 boribory faribolana OG milina fitaratra malaza indrindra
Manaraka: mandeha ho azy dehydrator fitsaboana rano sentrifugal ara-batana
Masinina Sandblasting Glass mandeha ho azy
Masinina Sandblasting mora ampiasaina
Glass Glass Sandblasting Machine
Masinina Sandblasting Glass mitsangana